काठमाण्डौ जाँदै हुनुहुन्छ ? होस् गर्नुहोला पर्नुहोला ठुलो समस्यामा ! – Online Nepal
काठमाण्डौ जाँदै हुनुहुन्छ ? होस् गर्नुहोला पर्नुहोला ठुलो समस्यामा !
May 5, 2020 390
सवारी पास बनाइहालेँ, अब ढुक्कसँग उपत्यका जान्छु भनेर तपाईंले धारणा बनाउनुभएको छ ? या त अब सवारी पास बनाइएर उपत्यका जान्छु भन्ने सोच छ । याद गर्नुहोस् ! पास बनाउँदैमा अब उपत्यका छिर्न पाउनुहुन्न । नागढुङ्गा, फरपिङ, मुड्खु, जगाती, जरसिङपौवा या अर्काे कुनै नाकाबाटै फर्कनु पर्ने पनि हुनसक्छ । दुःख मात्रै पाउन सक्ने भएकाले बेलैमा ध्यान पु¥याउनुहोला ?
Prevलकडाउन खुकुलो बनाउँदा भारतमा ह्वातै बढे कोरोनाका नयाँ सङ्क्रमित
Nextनिको भएर घर फर्किएका तीन जनामा पुनः कोरोना पोजेटिभ !
१८ वर्ष पुगेकालाई अनिवार्य सैनिक तालिम माग गर्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता
नेपालमा पहिलोपटक एकै दिन कोरोनाले छ जनाको मृ त्यु